STI graduates are leading fulfilling, illuminated and rewarding lives. We are proud to hear their success stories and see them unleashing their potential both in Myanmar and abroad. Our graduates constantly contact us to tell us how their education with STI is making their life an exceptional one. We have graduates who have gone on to become business owners and operators, and work in high ranking positions.
မေး- မင်္ဂလာပါဆရာ ၊ ဆရာက STI Myanmar University မှာ MSc (Public Health)... ..readmore
MSc ( Public Health) မဟာဘွဲ့ Full scholarship ရရှိခဲ့သော နတ်တလင်းမြို့ ကျန်းမာရေးမှူးကိုသိန်းလှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်ခရိုင်နတ်တလင်းမြို့ မှကျန်းမာရေးမှူး ကိုသိန်းလှိုင်
STI Myanmar University နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Bedfordshire ( UK) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ပြည်သူကျန်းမာရေး.... ..readmore
STI Myanmar University မှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော အင်္ဂလန် နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု အာဟာရပညာရှင်အားဂုဏ်ပြုခြင်း
Dr. Ei Mon Phyo
STI Myanmar University နဲ့ University of Bedfordshire, UK တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ MSc (Nutrition & Dietetics).... ..readmore
STIMU ၏ MSc ( Public Health) ဘွဲ့ရ ကျောင်းသူ ဒေါက်တာ ခင်စံပယ်မောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Dr. Khin Sabal Maung
မေး- မင်ျဂလာပါဒေါကျတာ ၊ ဒေါကျတာက STI Myanmar University မှာ MSc (Public Health) ဘှဲ့သငျတနျးကိုတကျရောကျအောငျမွငျထားတယျလို့ သိရပါတယျ ။.... ..readmore
Dr. Khin Nyein Chan
STI Myanmar University နှင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Bedfordshire ( UK) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ပြည်သူကျန်းမာရေး..... ..readmore
STI Myanmar University တွင် University of Bedfordshire မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော BEng (Hons) Architectural Engineering ဘွဲ့ကို 1st Class ဖြင့် အောင်မြင်ပြီးသူ မဇင်ပွင့်ဖြူ ၊ မသူဇာအောင်တို့ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Zin & Thuzar Aung
ကျွန်မက မဇင်ပွင့်ဖြူပါ ။ ညီမက မသူဇာအောင်ပါ။ STI Myanmar University မှာ University of Bedfordshire က..... ..readmore
STI Myanmar University တွင် University of Bedfordshire (UK) မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော BEng (Hons) Architectural Engineering နှင့် Civil Engineering ဘွဲ့များကို1st Class ဖြင့် အောင်မြင်ပြီး သူ ကျောင်းသား,သူ များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကျွန်တော်က ဂျွန်မင်းကြည်စောပါ။ သမီးက ပန်းမြတ်ပါ ။ သမီးက အေးချမ်းမြင့်မိုရ်နဲ့ သမီးရဲ့အမြွှာ သူက အေးငြိမ်းမြင့်မိုရ်ပါ။... ..readmore
STI Myanmar University တွင် University of Bedfordshire (UK) မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော BEng (Hons) Civil Engineering ဘွဲ့သင်တန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သော မောင်စိုင်းထူးအောင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Sai Htoo Aung
မောင်လေး ရဲ့နာမည်နဲ့ STI မှာ သင်ယူခဲ့တဲ့ မေဂျာတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦး.... ..readmore